Ndịàmà Jehova Chetara Otu Narị Afọ Ha Nọwara na Koria
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Yoruba Zulu
NỌVEMBA 27, 2012
AKỤKỌ a si n’obodo Sol dị na Koria. Ihe karịrị otu narị puku Ndịàmà Jehova nọ na Saụt Koria weere ọnwa Nọvemba afọ 2012 ka ọnwa pụrụ iche. Ọ bụ n’ọnwa ahụ ka ha chetara otu narị afọ ha nọwara na Saụt Koria. Otú ha si mee ya bụ na ha kesaara ọhaneze traktị ha ji echeta otu narị afọ ha nọwara na Saụt Koria. Traktị ahụ mara mma, dịrịkwa peeji anọ. Ihe e dere na ya bụ ihe Ndịàmà Jehova nọ na Saụt Koria merela na ihe ndị ha na-eme ugbu a.
Ọ bụ n’afọ 1912 ka ndị Jehova bịara Koria kụziwere ndị mmadụ Baịbụl. Ka ọ dị ugbu a, Ndịàmà Jehova ebipụtala ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ narị puku Baịbụl asaa n’asụsụ Korian. Kwa izu, Ndịàmà Jehova nọ na Koria na-amụkwara ihe karịrị iri puku mmadụ asaa Baịbụl n’anaghị ha ego. Ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị na Koria dị ihe karịrị otu puku na narị atọ. Ọgbakọ nke ọ bụla na-ezukọta amụ Baịbụl kwa izu, onye ọ bụla nwekwara ike ịbịa soro ha mụọ ihe. O teekwala Ndịàmà Jehova nwewara mgbakọ ukwu na Koria. Nke mbụ ha nwere na Koria bụ n’afọ 1954. Ọ bụghị naanị ndị na-anụ Korian ka mgbakọ ndị a na-abara uru, n’ihi na kemgbe afọ 1997, a na-enwe ya n’asụsụ ndị ogbi nke Koria. N’afọ 2009, Ndịàmà Jehova nwere mgbakọ mba niile ha na Sol, ndị bịara ya karịkwara iri puku mmadụ ise na puku asatọ. E nwekwara ndị si mba iri na otu bịara ya. Ha karịrị puku mmadụ isii na narị mmadụ ise. E wuru alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova na Sol n’afọ 1953.
Onye na-ekwuchitere Ndịàmà Jehova nọ na Koria aha ya bụ Dae-il Hong, kwuru, sị: “Anyị ji ihe a na-echeta otu narị afọ anyị jirila jeere ndị agbata obi anyị ozi.” O kwukwara, sị: “Anyị kweere na ime ihe Baịbụl kwuru na-eme ka ndị di na nwunye dị n’ezigbo mma, mee ka ezinụlọ na-enwekwu obi ụtọ, meekwa ka obodo dịrị n’udo. Anyị na-atụ anya ijikwu ọtụtụ afọ jeere ọhaneze ozi.”